Ebe njedebe: United Arab Emirates | Akụkọ Njem
Site na oge ruo na nke a na Middle East Ike abiala nke oke akụ ya sitere na mmiri mmiri anyị, nke na - eme ka ụwa gbaa gburugburu maka oge a: mmanụ. Ana m ekwu maka United Arab Emirates.
ya alaeze dị asaa ndị na-eme mba a ma taa anyị ga-echeta ntakịrị mbụk esie, site n'ọzara ruo akụ na ụba, ohere njem nleta na ha na-enye anyị taa. A njem na Arabia peninsula, ozugbo a ala nke dunes na ebo, taa ala nke skyscrapers na ego.
2 United Arab Emirates taa
3 United Arab Emirates na njem nleta
E nwere alaeze asaa na-eme obodo a: Dubai, Sarja, Umm al-Qaywayn, Fujairah, Ajman, Abu Dhabi na Ras al-Khaimah. Dị ka ọ dị n'Africa, ike ndị Europe nwere njikọ dị ukwuu na nhazi mpaghara nke mpaghara. N’ebe a, ndị na-eme nchọpụta Portuguese bịarutere na narị afọ nke XNUMX, na-achọ na ụzọ mmeghe ga Eshia. Ka oge na-aga, na narị afọ nke XNUMX na XNUMX, ọ bụ ndị Britain mere Osimiri Peshia ebe dị mkpa n'okporo ụzọ azụmahịa ha.
N'aka nke ndi Europe, choro imeghe ahia, n'aka nke ozo ndi Arab na-aru oru n'ihu di iche iche n'ihi na agbakwunye na ndi Europe nọ n'ógbè Ottoman na Peasia na ihe kpatara na ha adighi, ndi ohi. Anyị amaworị nke ahụ ndị Britain Ha mere nke ọma na-achị ụwa, ya mere na narị afọ nke XNUMX ha guzobere a nchedo na mpaghara nke ugbu a.
Site na itinye aka na nkwekọrịta ndị isi obodo, ndị General Maritime Treaty na 1820 nke kwuru na ndị Arab ga-ahụ maka ndị ohi. Afọ iri atọ mgbe e mesịrị na Na-adịgide adịgide Maritime Truce oro ama anam nsụn̄ikan̄ Britain ẹsan̄a ẹbe. Mgbe ahụ, ndị Britain wee si nkwojiaka aka n'ikpere aka na-enweta na 1892 na Nanị nkwekọrịta nke ndi Arab enweghi ike inwe mmekorita ha na ike ndi ozo na United Kingdom nyere ha nchebe nke ala na ndi ichoro ahia na nloghachi.
Anyị na-ekwu maka ezinụlọ ndị Arab oge ahụ anụbeghị maka ebe a na-egwu ọla edo ha kwagara. N'ihi ya, ha na-ata nri, na-akụ azụ ma kpokọta ib. Ọ bụ nanị mgbe a lụchara Agha Worldwa nke Abụọ ka mbụ mmanụ na gas. Ọganihu ahụ malitere. Agha ahụ biri ma hapụ Alaeze Ukwu Britain ka mba ndị ahụ wee malite ịkwado maka nnwere onwe ha.
UK wepụrụ na 1968 na ndị alaeze ukwu gbakọtara iji hụ ka ha si gaa n'ihu. Dubai na Abu Dhabi zutere ma kpọọ ndị nchebe nke Bahrain na Qatar. Esemokwu ndị sochirinụ banyere ezinụlọ Arab ga-eme ka ha kewaa, mana na 1971 United Arab Emirates mụrụ, gọọmenti ọhụrụ nke mmadụ isii. Ras al Khaima anọghị n'oge a n'ihi na o nwere esemokwu ókèala ụfọdụ na alaeze nke Sarja, mana ọ sonyere otu afọ mgbe e mesịrị.
Ọ bụ Sheikh nke Abu Dhabi, Zayed bin Sultan al Nahayan, onye jigidere onye isi ala site na 1971 rue mgbe ọ nwụrụ na 2004. Ya na ebumnuche ya ji ụgwọ mgbanwe nke oge a na steeti na ikike nke etiti n'etiti ndị ikwu asaa ahụ, bụ ndị adịghị mfe. Aka na aka petrodollars, United Arab Emirates banyere a Usoro mmezi ngwa ngwa na '90s ma otu a ndị ọzụzụ-atụrụ, ndị na-apụnara mmadụ ụra, na ndị na-akụ paịl ghọrọ ndị na-eme ihe nkiri na akụnụba obodo.
United Arab Emirates taa
Dị ka European Union ọ bụghị alaeze niile bụ otu. Enwere esemokwu akụ na ụba n'ihi na anaghị ekesa akụ mmanụ. Dịka ọmụmaatụ, Abu Dhabi na-etinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% na Dubai 5% n'ime ha. Ọzọkwa, steeti abụọ a nwere ụgbọ elu nke ha nke mere na ha nwere ụzọ azụmahịa dị mkpa. Ha abụọ na-anọchite anya 83% nke GDP, ya mere, obere alaeze ise kachasị na-adabere na ha site na ụtụ isi gọọmentị.
Mana ọ dị nfe iwebata usoro egwu asaa n’otu steeti? Ọ bụghị nke ukwuu. Edere iwu na 1971 ma debe ya ruo 1996, ọ bụ ezie na nke ahụ abụghị nzube ya na mbụ. N'ebe a ka ekwesiri ya isi obodo bu Abu Dhabi site na ndọtị, ọ bụ eze ya na-achị steeti ahụ. Ka oge na-aga, usoro iwu na-ekwu maka ịdị n'otu nke ọtụtụ usoro dị mkpa na steeti: ụtụ isi, gbasara ego obodo, agụmakwụkwọ, ahụike ... Na mgbakwunye na usoro ikpe ikpe na ndị agha.
Taa, naanị Ras al Khaima na Dubai nwere ụlọ ikpe nke ha ma guzobe ha ndị agha steeti Ha so n'ime ndị kachasị ike na mpaghara ahụ. Ihe niile na-achịkwa Federal Council Council nke na-ezukọ ugboro anọ n'afọ. Ndị eze niile na-aga na kansụl a ma họpụta ndị ozi ma ọ bụ ndị akwadoro, kesaa ọkwá, a na-atụle iwu na mmefu ego. Onye isi ala na-ahọpụta onye isi ya, mana na-atụlekarị ndị niile alaeze.
Enwere ntuli aka na United Arab Emirates? Ole na ole Gọọmentị nwere ndụmọdụ gbasara iwu site na Federal National Council, nke mebere mmadụ 40, sitere na alaeze asaa ahụ, bụ ndị ahọpụtara na ntuli aka. Naanị ihe karịrị mmadụ 300 puku mmadụ nwere ike ịme ntuli aka ọ bụ Kọmitii Ntuli Aka Mba na-ahọrọ ha nke na-atụle mmekọahụ, afọ, ọzụzụ na ebe obibi.
Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, na nhoputa ndi ochichi nke 2006, nke mbụ, naanị ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke 6 sonyere. Taa, ọnụ ọgụgụ ahụ ka ukwuu ma na 2011 ha abụrụ puku 130 na 300 puku na 2019. Mụ nwanyị ahụ? Ọ dị mma, ntuli aka pere mpe na ntuli aka nke afọ gara aga enwere ihe dịka 180 ka a ga-ahọpụta n'ọnọdụ ụfọdụ, agbanyeghị naanị mmadụ asaa nwere ike ịme ya. Ya bụ, enwere ụmụ nwanyị asaa na Federal National Council.
Eziokwu bụ na hiwere iwu, Iwu Alakụba, bụ ihe njikwa na ọnọdụ mmekọrịta na mmekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mba ahụ. Agbanyeghi na alaeze obula nwere ikike nke nnwere onwe ha, onweghi ihe puru imegide ochichi etiti, nke ndi Islam na-achi. Enwere nnwere onwe okpukpe, mana naanị onye nwere ike igosipụta n’ihu ọha bụ Islam.
Onye obula huru ihe ngosi banyere United Arab Emirates ma obu otu n’ime steeti ya mara na odi uzo abuo: nke ndi ogaranya na nke ndi ogbenye. Nke ikpeazu kariri ihe obula ndị ọrụ mba ọzọ raara nye ụlọ ọrụ ihe owuwu. Ndị India, ndị Pakistan, ndị Bangladesh ndị hụrụ akụnụba nke ndị ọzọ na obere ụzọ. Nke a bụ ikpe kachasị na Abu Dani, Sarja ma ọ bụ Dubai, bụ isi obodo mepere emepe nke nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị bi na ya.
na emiratis ha na-anọchite anya 11% nke ndị bi n'ógbè ahụ, otu nde mmadụ. A na-eme atụmatụ na 34% n'ime ha erughị afọ 25 ma nwee nnukwu enyemaka site na steeti. Mgbe ahụ ndị ọzọ bụ ndị ọrụ mba ọzọ, nwere ọrụ aka ọrụ, ndị na-akpata ezigbo ego. Ọ kachasị n'ime mpaghara ume.
N'ikpeazụ, Kedu ihe jikọrọ Emirates na ndị ọzọ nke ụwa? A ghaghi ikwu na ọ bụ mba Arab nke atọ inwe Mmekọrịta mba na mba Israel, ma ọ bụghị obere. Site na nke a o nwere ọnọdụ ọzọ na esemokwu Palestine na na-emegide Iran. N'ezie, ya na Iran nwere esemokwu banyere ụfọdụ agwaetiti nke UAE na-ekwu maka onwe ya na Strait nke Omuz ma na-ebo ya ebubo na ọ na-akwalite mmegide nke ime obodo site na iwe ndị obere Shiite.
ya Dubai na Abu Dhabi onye chịrị amụma mba ofesi nke steeti, mmekorita nke akụ na ụba, nke akụ na ụba na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ka anyị ghara ichefu na ọ bụ enyi na United States, kemgbe nnwere onwe ya, na ebe a, e nwere ndị agha America. Nsogbu ya na Iran ewetawokwa UAE nso Saudi Arabia, obodo choro igbaso nzo ukwu nke oganihu onye agbata obi ya.
United Arab Emirates na njem nleta
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, mba ahụ ejirila ink na njem nlegharị anya, na-anwa iji ya ihu igwe na-ekpo ọkụ, agwaetiti ya ndị e ji aka wuo na ebube nke obodo yas si n'ọzara pụta. Obi abụọ adịghị ya na ndị mmadụ na-ebu ụzọ aga Dubai, ebe o yiri ka ego ndị njem na-erite ugbua karịrị nke mmanụ.
Ebe a ndị njem nleta nwere ike ịnweta ntakịrị ndụ n'ọzara, yana njem mmụta na 4 × 4 jeep, abalị Arabian n'etiti dunes na camell na-agba ịnyịnyao, ma ọ bụ gaa zụọ ahịa ma ọ bụ gaa ụlọ mmanya na ndụ jupụtara na abalị.
Taa, ọ bụ alaeze ndị Ras al Khaima na Umm al Quwain na-achọ ịzụlite akụnụba ha aka na njem. Ka ọ dị ugbu a, Fujairah na-achọ ime ka ọdụ ụgbọ mmiri ya bụrụ ebe etiti maka azụmaahịa ụgbọ mmiri, Sarja bụ isi obodo ọdịbendị na agụmakwụkwọ, Ajman bụkwa ụgbọ mmiri na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Ihe a ga-ele anya bụ ma mgbe mmanụ ga-agwụ, dịka ọ ga-adị, mba ndị a ga-adị ndụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » United Arab Emirates » Ebe: United Arab Emirates